UManel Loureiro: ngubani na kwaye zeziphi iincwadi ezibhalwe ngumbhali | Uncwadi lwangoku
Encarni Arcoya | 29/07/2021 20:43 | Ukuhlaziywa ukuba 29/07/2021 21:02 | Ababhali
Umthombo wefoto Manel Loureiro: Libertaddigital
Igama likaManel Loureiro ngokuqinisekileyo livakala liqhelekile kuwe kuba ulivile. Ukuba ungumfundi onomdla, usenokuba ukhe wayifunda. Ukuba akunjalo, kwaye uhlala uhleli kumabonwakude, kunomathotholo okanye kumaphephandaba, usenokudibana nayo. Kwaye lo mbhali, intatheli kunye negqwetha liyayazi indlela yokwenza usiba (kunye nomlomo) umsebenzi wakhe.
Kodwa, Ngubani uManel Loureiro? Zeziphi iincwadi ozibhalileyo? Ukuba unomdla wokudibana nalo mbhali, siya kukubonisa yonke into esiyaziyo ngaye.
1 Ngubani Manel Loureiro
2 Zeziphi iincwadi ezibhalwe nguManel Loureiro
2.1 Isityhilelo z
2.2 Iintsuku ezimnyama
2.3 Umdlalo weZihlalo zobukhosi: incwadi ebukhali njengentsimbi yeValyrian
2.4 Ingqumbo yamalungisa
2.5 Umgibeli wokugqibela
2.7 Amashumi amabini
2.8 Umnyango, yeyona nto imnandi kakhulu kuManel Loureiro
Ngubani Manel Loureiro
UManel Loureiro wazalelwa ePontevedra nge-30 kaDisemba ngo-1975. Waphumelela kwezomthetho kwiDyunivesithi yaseSantiago de Compostela, ke uligqwetha. Nangona kunjalo, ngeentsuku zakhe zokufunda wayenethuba lokusondela kwimisebenzi enxulumene nomabonakude. Kuqala wayenza njengomboniso weendaba, kodwa kamva wajongana nezikripthi kwaye kuxa waqonda ukuba ukuthanda kwakhe okwenyani yayingengomthetho, okanye ubuntatheli okanye umabonwakude, kodwa yayikukubhala.
Ewe akususi oko qhubeka nokusebenzisana kumajelo eendaba. Kwaye kunjalo, nangona ebengumsasazi kwiGalicia Television, ngoku uyasebenzisana kumaphephandaba afana neLa voz de Galicia, iphephandaba iABC, El Mundo, imagazini ye-GQ kodwa nakwirediyo, ngakumbi eCadena Ser no-Onda Cero. Uye wakwazi nokumbona kumabonwakude, ngakumbi kwinkqubo iCuarto Milenio, eCuatro, apho ibinecandelo lamaxesha ngamaxesha ukusukela ngo-2016.
Inoveli yakhe yokuqala yeza ngebhlog. Kwaye kukuba wazinikezela ekubhaleni iincwadi ngexesha lakhe kwaye, kwaba njalo impumelelo yakhe, ngaphezulu kwesigidi nesiqingatha sabafundi abakwi-Intanethi, yabangela ukuba, akugqiba ukuyipapasha. Kwaye khange idanise nayo; Ngethuba elifutshane yayisisithengisi esithengisa kakhulu, esenza abapapashi abaninzi bahoya lo mbhali owayevela kwaye wayetsala umdla ngakumbi nangakumbi, hayi phakathi koluntu lwaseSpain kuphela, kodwa nakwamanye amazwe. Kungenxa yoko le nto, emva kwencwadi yokuqala, i-Apocalypse Z, kwavela ezinye ezininzi kwiminyaka eliqela (ngo-2011 kuphela wakhupha iincwadi ezimbini).
Njengomdla, siya kukuxelela ukuba kwinoveli yakhe yokuqala kukho nomdlalo webhodi. Oku kwaxhaswa ngemali ngabantu abaninzi xa kwapapashwa ibali.
UManel Loureiro angazingca kuba ungomnye wababhali abambalwa baseSpain abakwazileyo ukuba kuluhlu lweencwadi ezithengisa kakhulu eMelika, into ekungekho lula ukuyifumana.
Zeziphi iincwadi ezibhalwe nguManel Loureiro
El Incwadi yokuqala eyapapashwa nguManel Loureiro yiApocalypse Z, ngo-2007, yindlu yokupapasha yaseDolmen (nangona kwiminyaka emithathu kamva yaphinda yakhutshwa kwakhona yenye indlu yokupapasha, iPlaza neJanés). Ukusukela ngalo mzuzu, kwaye ebona impumelelo awayenayo, waqala ukunikezela ixesha elingakumbi ekubhaleni, kwaye kule minyaka idlulileyo iincwadi ezininzi ezibhalwe nguye bezisiza. Sibajonga kwakhona.
Akukho intanethi. Akukho TV. Nokuba iselfowuni.
Akusekho kwanto ekukhumbuza ukuba ungumntu.
Ngoku kushiyeke injongo enye kuphela: Sinda.
Liyaqala ke ibali apho intsholongwane isasazeke ngaphandle kokuthintela kuyo yonke iplanethi kwaye yabulala wonke umntu osulelwe yiyo. Ingxaki kukuba, emva kweeyure ezimbalwa, le ndoda ifileyo ibuyela ebomini kwaye yenza njalo ngendlela enoburharha.
E-Spain, igqwetha elisencinci liphethe ukugcina idayari apho libhala khona konke ukuqaphela, ebona yonke imihla yalo. Kuze kube yilapho bengena endlwini yakhe kwaye kufuneka abalekele eGalicia, ngoku ngoku unelinye igama: I-Apocalypse Z.
Abasindileyo be-Apocalypse Z bayakwazi ukufikelela kwiiCanary Islands, enye yeendawo zokugqibela ezikhuselekileyo kwi-Undead. Kodwa into abayifumanayo apho yimikhosi yasemkhosini ebandakanyeke kwimfazwe yamakhaya, enabantu abalambileyo kwaye kungekho naziphi na izixhobo zokuphila.
Nguye Inxalenye yesibini yebali lakhe lokuqala, apho ahlangula khona umlinganiswa ophambili wenoveli yakhe, eyenze ukuba uManel Loureiro aphumelele kakhulu, kwaye kwakhona imbeka engxakini yokuzama ukusindisa ubomi bakhe kwi-undead.
Umdlalo weZihlalo zobukhosi: incwadi ebukhali njengentsimbi yeValyrian
Le ncwadi yayingabhalwanga ngokupheleleyo nguye, wayengumbhali-mbhali kuphela kwaye, njengoko igama layo libonisa, yayithetha ngeMidlalo yeTrone uthotho kunye nesiphumo esasinaso kuthotho.
Abasindileyo kwi-apocalypse ye-zombie banethuba: bahlangulwe embindini wolwandle lelinye lamaqela agqityiweyo aseleyo eMhlabeni. Banyanzelwa ukuba bahambe nabahlanguli babo, bafikelela kwiGulf of Mexico, indawo ebonakala ichuma phantsi kolawulo lobubele lomshumayeli ongaqondakaliyo.
Ku malungaIncwadi yokugqibela yeSityhilelo Z, Apho umbhali efaka engxakini kwakhona iqela labasindileyo elizama ukuhlala kwihlabathi elinobundlobongela. Nangona umntu engafundanga kwaye esenamabhongo, elixoki kunye nenkohliso, ke umlinganiswa ophambili kunye nabalingane bakhe kuya kufuneka bazame ukoyisa imiqobo kwakhona.
NgeyeThupha ngo-1939. Umkhumbi omkhulu wolwandle ogama linguValkirie ubonakala ulwandlekazi lweAtlantic. Inqanawa endala yothutho iyifumana ngengozi kwaye yayirhuqa iye kwizibuko, emva kokufumanisa ukuba kushiyeke usana olunenyanga ezimbalwa ubudala ... kunye nenye into ekungekho mntu ukwaziyo ukuyichonga.
Imfihlelo yokuba, Kwiminyaka engama-70 kamva, iyaqhubeka nokuphazamisa abaninzi, Ukuza kuthi ga kwinqanaba lokuba usomashishini athathe isigqibo sokubuyisa inqanawa ebomini ukuze alandele indlela awayeyenza ngaphambili ekhangela impendulo kwinto eyenzekileyo. Ewe, abo bakwisikhephe kuya kufuneka babenengqondo ngokwaneleyo ukuthintela into efanayo ukuba ingenzeki kwakhona.
Ubomi bukaCassandra buphantse bagqibelela de kwaba yimini apho afumana ingozi engaqhelekanga yemoto emshiya equlekile. Emva kweeveki ezimbalwa, nasemva kokuchacha ngokungummangaliso, uCassandra ufumanisa ukuba umhlaba wakhe utshintshe ngokupheleleyo: kukho umntu oqale ukonwaba ekhayeni lakhe kunye nosapho kwaye ukhathazwa ziziphumo ezibi angakwaziyo ukuzilawula.
Umlinganiswa ophambili ayinguye kuphela umfazi oziva ngathi akanakubulawula ubomi bakhe, Endaweni yoko, oku "kukuhlukumeza" kugcwele ubundlobongela, ukubulala kunye nokufuna ubulungisa kuthetha ukuba akazi ukuba kwenzeka ntoni. Lumka, nangona ijongeka ngathi iyonwabisa, eneneni yahlulwe yaza yoyikisa (asizukuxelela ukuba kutheni).
Apha uManel Loureiro ufuna ukwenza umfundi athabathe inxaxheba kwingxoxo mpikiswano malunga nento onokuthi uzimisele ukuyincama ukukhusela abantu obathandayo.
Ngelo xesha, kwakungekho mntu waziyo ukuba kwenzeka ntoni. Ngaphandle kokuba inxenye enkulu yoluntu izibulale kwiintsuku nje ezimbalwa. Phakathi kwabasindileyo kukho u-Andrea, intombazana eneminyaka elishumi elinesixhenxe, inkedama kwaye enesithuba esikhulu kwimemori yakhe. Ukususela ngezo ntsuku, wayekhumbula kuphela indlela anyanzelwa ngayo kwilori yomkhosi ezele ngabantu aboyikayo abaleka kwesisongelo sinye.
Omnye Ibali le-apocalyptic apho abalinganiswa bagcina iimfihlo, nangona bona bengazi. Nangona incwadi iqala ngoluhlobo, inyani yeyokuba uManel Loureiro kamva udlulela kwikamva elikude kakhulu, apho ilizwe litshintshileyo abo basindileyo kunye nenzala bazama ukubuyela "kwimeko yesiqhelo" phakathi kwamabhodlo oko kwakusakuba bubuntu . Kodwa ke kulapho kanye oko kuphelileyo ukuba uluntu luphinde luvele.
Umnyango, yeyona nto imnandi kakhulu kuManel Loureiro
Ulwaphulo-mthetho. Umfazi unqwenela ukusindisa unyana wakhe. UManel Loureiro uyothusa ngomdlalo oshukumisayo kwiGalicia eyimfihlakalo kunye nebali.
Ke ungashwankathela into oza kuyifumana kule thriller. Ngaba isethwe eGalicia kwaye kuyo uya kuba nepolisa, uRaquel Colina, osandula ukufika kweli lizwe efuna unyango kunyana wakhe. Nangona kunjalo, ubalekela ekubulaleni nasekunyamalaleni okubonakala ngathi kuhambelana. Ke, kulo lonke uphando lwakho, awuzukujongana nokusombulula ityala kuphela, kodwa nokuzama ukusindisa ubomi bonyana wakho.
Ngaba unesibindi sokufunda nayiphi na imisebenzi yakhe?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ababhali » UManel Loureiro